Izindatshana zikaJohn Koetsier zivuliwe Martech Zone |
Imibhalo nge UJohn Koetsier
UJohn Koetsier uyintatheli, umhlaziyi nophambili. NjengoSomnotho Wezelula ku TUNE, Ngibikezela futhi ngihlaziye izitayela ezithinta imvelo yeselula. Ngibe yintatheli, umhlaziyi, kanye nomphathi wezinkampani, futhi ngikubalile ukukhuphuka komnotho weselula. Ngaphambi kokujoyina i-TUNE, ngakha ithimba locwaningo i-VB Insight eVentureBeat futhi ngaphatha amaqembu enza isoftware yabalingani abanjengo-Intel neDisney. Ngaphezu kwalokho, ngihole amaqembu ezobuchwepheshe, ngakha amasayithi wokuxhumana nomphakathi nezinhlelo zokusebenza zeselula, futhi ngathintana neselula, ezenhlalo, ne-IoT. Ngo-2014, ngabizwa ohlwini lwabangu-100 abahamba phambili embonini yezindaba "osomabhizinisi abasha kakhulu nabathengisi bezimakethe." Ngihlala eBritish Columbia, eCanada nomndeni wami, lapho ngiqeqesha khona i-baseball ne-hockey, yize kungenjalo ngasikhathi sinye.
Izinto eziyi-10 Amahora ama-8 e-CES 2017 Ungifundise Ngobuchwepheshe Bakusasa
NgoLwesihlanu, January 13, 2017 NgoMgqibelo, Okthoba 20, 2018 UJohn Koetsier
Njengesilima, ngijoyine abanye abachwepheshe bezobuchwepheshe abathanda igajethi, abezimakethe, abagqugquzeli, ama-hucksters, nabasizi be-165,000 ngesonto eledlule. Isikhathi sami esiningi bengisichitha ngihlangana nabantu. Noma, ngokunembe kakhudlwana, eLyfts, e-Ubers, nakuma-cabs alwa i-Vegas traffic kusuka esihogweni ngisendleleni ngiyohlangana nabantu. Kepha ngigodle amahora ayisishiyagalombili wento wonke umuntu othanda ubuchwepheshe okufanele ayenze okungenani kanye: ukuzulazula phansi kwamahholo amakhulu omhlangano eCES,